Dillaac cusub ayaa xaqiijinaya in Apple Watch Series 7 uu ku imaan doono 45 mm | Waxaan ka imid mac
Dillaac cusub ayaa xaqiijinaya in Apple Watch Series 7 uu ku imaan doono 45mm
Maalintii shalay, Warar xan ah oo taxane ah ayaa booday oo ku saabsan suurtagalnimada in taxanaha xiga ee Apple Watch 7 uu ku imaan doono laba cabbir oo cusub. 41 iyo 45 mm. Sida muuqata mar hore ayaa loo xisaabtamaa inay ka badan tahay xanta. Dillaac cusub ayaa u muuqda inuu xaqiijinayo cabbirka 45 Oo waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la tixgeliyo marka lagu daro nashqadeynta laba jibbaaran ee cusub oo lamid ah tan iPhone 12.
UnclePan wuxuu adduunka u sii daayay suurtagalnimada in Apple Watch -ka soo socda uu ku imaan doono laba cabbir oo waaweyn. Wax badan maahan, milimitir ka badan. Hadda mar labaad, waa la xaqiijiyay, laakiin xan kale. Waqtigan xaadirka ah ma jiraan wax rasmi ah. Laakiin mar hore ayaa la ogaa in xanta badan ay ka dhalato wax la mid ah, aakhirka waxay umuuqataa inay run tahay. Marar badan waxaan u malaynayaa in Apple uu sameeyo waxyaabo iyadoo la tixgelinayo heerka xanta.
Xaqiiqdu waxay tahay in la soo daatay sawir lagu arkay qoraalka 45 mm, oo tilmaamaya baaxadda sanduuqa cusub. Sawirka wuxuu ka yimid DuanRui, oo loo tixgelin karo "mararka qaarkood la isku halleyn karo." Isticmaaluhu wuxuu wadaagay sawir waxa uu u eg yahay Twitter -ka Loop Maqaarka Apple Watch. Si kastaba ha noqotee, halkii ay ka ahayd 44mm, suunka saacaddan waxaa lagu calaamadiyey 45mm.
Apple Watch Taxanaha 7
Hadda UnclePan ayaa isna sidaas yiri Noocyadii hore ee Apple Watch waxay sii wadi doonaan inay la jaanqaadaan naqshadda cusub ee Apple Watch Series 7. Taasi waa sababta sawirkaan iyo macluumaadkaan loogu tixgeliyo xan. Laakiin sidaan hore u sheegnay, hadba wararka xanta ah ee isla mawduuca laga sheego, ayay sii badanaysaa fursadaha ay ku rumoobi karaan.
Si meesha looga saaro shakiga iyo hubka kaliya ee lagaga soo horjeedo xanta, waa el tiempo. Marka dhacdada Apple dhacdo, waxaan si rasmi ah u nadiifin doonaa shakiga oo waxaan arki doonaa haddii aan haysanno 45 mm Apple Watch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Dillaac cusub ayaa xaqiijinaya in Apple Watch Series 7 uu ku imaan doono 45mm
Shixnadaha Mac ayaa kordhay 24%
WatchOS 7 beta 8 ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha